Aqalka Sare ee Soomaaliya oo maanta ka doodaya xeerka gobonidama Soomaaliya. – The Voice of Northeastern Kenya
Aqalka Sare ee Soomaaliya oo maanta ka doodaya xeerka gobonidama Soomaaliya.
Star FM March 13, 2018
Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaliya ayaa maanta Kalfadhiga 3aad kulankiisa koobaad ku yeelanayo Xaruntooda Magaladda Muqdisho sida qaar ka mid ah mudanayaashaasi ay u sheegeen warbaahinta Soomaaliya.
Kulanka Maanta ee Xubnaha Aqalka Sare ayaa waxaa looga doodi doonaa dhowr Ajande waxaana ugu weyn Xeerka Dhowridda Gobonimada iyo Madaxbanaanida Geyiga Soomaaliya kaasoo shalay Xildhibaanada Golaha Shacabka ay Meel mariyeen islmarkana dalka looga Mamnuucay Shirrkadda DP World ee laga leeyahay Wadanka Isutagga IMaaraadka Carabta.
Sida uu qorshuhu yahay Dood dheer ka dib ayaa mudanayaasha aqalka sare laga sugaya inay ansixiyaan si markaasi uu u saxixo Madxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi farmaajo,taasoo kadibna lagu soo saari doono faafinta dowlada sida ay baarlamaanka Hoose shalay sheegeen.
Xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhanka kale daba gal ku sameyndoonan Weerarkii bishii December ee sanadkii 2017ki lagu qaaday Guriga uu Magaalada Muqdisho Ka degan yahay Senator Cabdi xasan Cawaale Qeybdiid taasoo ay sheegeen xildhibaanada aqalka Sare inay baarayaan xaqiida ka danbaysay weerarkaas.
← Guddoomiyah Xisbiga Wiper oo Raila ku dhaliilay kulankii uu la qaatay madaxweynaha dalka
DHAGEYSO xubinta xikmada ee star fm →